Ny Vaovao Asongadin’ny Sampam-baovao Voasoratra Anarana Ara-panjakana Ihany Sisa No Havoakan’ilay Milim-pikarohana Rosiana Ho Lohalaharana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2016 5:58 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Deutsch, Nederlands, Español, English, Български, English
Sary: Gazeta.ru, Google Images
Manomboka ny 1 Janoary 2017 ho avy izao dia tsy hampiseho voalohan'ny lisitra intsony izay lahatsoratra avy amin'ireo orinasa fampitam-baovao tsy misoratra anarana amin'ny fanjakana Rosiana ny Yandex, milina fikarohana sy fanangonam-baovao goavana indrindra ao Rosia, araka ny tatitry ny RBC tamin'ny Alakamisy.
Araka izay miparitaka be any amin'ny media Rosiana, dia nandefa taratasy tany amin'ireo orinasa fampitam-baovao iarahany miasa ny Yandex tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra, milaza ny fiovan'ny politikany momba ny fizaram-baovao. Mampitandrina ny taratasy fa raha tsy mampiseho porofo amin'ny fisoratana anarana ataon'izy ireo any amin'ny Roskomnadzor (sampan-draharaha mifehy ny media Rosiana) ilay orinasa fampitam-baovao hatramin'ny Taombaovao, dia tsy havoaka ao anatin'ireo vaovao “dimy voalohany” ao amin'ny pejy fandraisan'ny Yandex, Yandex.News intsony, na amin'ny tranonkala ahitana lohahevitra sy faritra manokana intsony ny fitaovan'izy ireo. Mbola hipoitra ao amin'ny fikarohana kosa, na izany aza ny votoatin'ireo “orinasa tsy nisoratra anarana”.
Voatery nanova ny fepetran'ny politikany momba ny fizaram-baovao sy ny fifanarahana amin'ireo orinasan'ny fampitam-baovao miisa 7000 miara miasa aminy ny Yandex noho ny lalàna tamin'ny Jiona 2016 izay nampiditra fitsipika vaovao momba ireo fanangonam-baovao izay manana mpijery 1 tapitrisa mahery isan'andro. Apetraky ny lalàna, ankoatra ny zavatra hafa fa mamaritra ny fahamarinam-baovao lehibe mivoaka any amin'ny tranonkala hafa ireo fanangonam-baovao alohan'ny amoahan'izy ireo izany indray. Nitsipaka ny lalàna ny Yandex tany am-boalohany tamin'ny filazàny fa tsy ho vitan'olombelona mihitsy ny fanamarinana ireo loharanom-baovao an'arivony.
Ahafahan'ireo fanangonam-baovao mandika ity fitsipika ity ny voalazan'ny lalàna farany raha voasoratra anarana ao amin'ny Roskomnadzor ilay orinasa fampitam-baovao.
Manana mpanara-baovao marobe ny Yandex.News, ka mahatonga ireo fikambanam-baovao tsy te-hisoratra anarana any amin'ny Roskomnadzor ho saro-toerana: araka ny filazan'ny TNS Rosia, olona 25 tapitrisa eo anelanelan'ny 12 ka hatramin'ny 64 taona no nitsidika ny tranonkala tamin'ny Septambra – tsy tanisaina intsony ireo nampiasa ny tranonkala tamin'ny finday. Tamin'ny Alakamisy ohatra, sampam-baovao miisa 81.220 no nisoratra anarana tany amin'ny Roskomnadzor, araka ny filazan'ny tranonkalan'ny sampan-draharaha. Na izany aza, notononin'i RBC i Vadim Ampelonsky, sekreteran-gazetin'ny Roskomnadzor ny RBC, izay toa nilaza fa mbola tsy naharay “firohotana fisoratana anarana marobe” izany ny sampan-draharaha.
Namoaka lahatsoratra indray ny Forbes.ru tamin'ity fahavaratra ity, manamarika fa tsy voasoratra any amin'ny Roskomnadzor ireo goavan'ny media Channel 1, Vesti.ru, NewsRU.com sy tranonkala hafa marobe. Tsy voasoratra anarana ihany koa ireo mpisehatra marobe amin'ny haino aman-jery lehibe, anisan'izany ny TJournal, iray amin'ireo fanangonam-baovao malaza indrindra ao Rosia. Ny sampam-baovao sasany, tahaka ny batenka.ru kosa tsy mikasa hisoratra anarana mihitsy, noho izy ireo mihevitra fa tsy fikambanana ara-baovao ry zareo—ary avy amin'ny media sosialy ny ankamaroan'ny mpijery azy ireo—ka tsy hampisy fanovana loatra ny filaharan-dry zareo any amin'ny faramparany.
Na izany aza, tsy faly amin'ny lalàna vaovao ireo orinasa fampahalalam-baovao. Araka ny nolazain'i Dmitry Navosha, talen'ny vavahadin-tserasera sports.ru tamin'ny RBC hoe:
Tsy misy olona mila ity lalàna ity … Te hanohana ny fanjakazakan'ny loharanom-baovaom-panjakana sy mpomba ny fanjakana ao amin'ny tambajotra ny manampahefana, amin'izay tsy ho voalohan-laharana ao amin'ny Yandex ny Meduza, Deutsche Welle, BBC sy ny BBC teny Rosiana ary hisy fiantraikany amin'ny sarin'ny andro raisin'ny Rosiana.